गैर आवासीय नेपाली बिश्व सम्मेलन : नेतृत्व चुनाव
१९ आश्विन, २०७६ शीतलपाटीन्युज डटकम। 1197
एलएन पाण्डे, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट।
लण्डन। फेरी गैर आवासीय नेपाली संघमा नयाँ कार्य समितिको चुनावको माहौल छाएको छ। सामाजिक सेवा गर्न उत्सुक गैर आवासीय नेपालीहरुले उम्मीदवारी दिने तथा जनमत बटुल्ने तर्फ़ आफ्नो काम छोडेर लागी परेका छन। उम्मेदवारी जित्नको लागि यथासंभव शक्तिको प्रयोग र स्रोतको उपयोग गरिरहेका छन। बास्तबमा, त्यों शक्ति र स्रोत यस अभियानमा रही पदीय भूमिका निर्बाह गर्नमा खर्च भए कस्तो राम्रो प्रतिफल आउथ्यो होला। मुलुकको राजनैतिक पदमा पनि केहि गरेर देखाए मात्र अर्को पटक जितेर जान पाइन्छ । राजनेताहरु एक पटक जित्ने अनि कार्यकाल भरी बसेर खाने र सके जति कमाउने उद्द्येशले प्रेरित भएको देखिका छन ! फेरी आफ्नो कार्यकालमा कमाएको पैसा अर्को चुनाबमा उपयोग गर्ने परम्परा पनि बिद्यमान नै छ !
कुरो नेतृत्व कै आउछ, मैले पनि त्यहीबाट उठान गर्दैछु। यहां पैसा खर्च भन्दा पनि अल्ली गंभीर खेल हुन थालेको छ, पैसा त छ भने केहि खर्च गर्दा पनि हुन्छ, कसैको उद्दार नै होला। कुलजी बेलायतबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सम्पूर्ण संघको अध्यक्ष पदको लागि उम्मीदवारी दिने तैयारी गर्दा बेलायत बासी खुशी नहुने त प्रश्न नै छैन, यों बेला बेलायतबासीको लागि गौरबको कुरो पनि हो, पछि कोही यस स्थान होला नहोला त्यसको ठेगान पनि छैन, त्यस माथि एक स्वाभिमान मित्रको लागि सहयोग गर्न बिरलै पाइन्छ। उता, जर्मनीबाट कुमारजीले प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ, दुइ पटक सफलता पुर्बक उपाध्यक्षको कार्यकाल निभाईसक्नु भएको ब्यक्तित्व। गैर आवासीय नेपाली संघमा दुबैको योगदान उल्लेखनीय छ र दुबैलाई सफलताको शुभकामना छ।
यों साधारण सभामा कुमारजी र कुलजीको नामले चर्चा पाएको छ र चुनाव भयो भने एक जना हार्ने निश्चित नै छ। मेरो चिंन्ता के हो भने त्यस पछि हार्नेको यस संघको अभियान प्रतिको गति समाप्त होला कि भन्ने? गैर आवासीय नेपाली संघले दुबै जना अभियंताहरुलाई अझै गुमाउन सक्ने स्थिति छैन । संघको प्रमुख मुद्दामा अहिले यथा संभव शक्ति (full throttal) दिनु पर्ने स्थितिमा म शक्ति ह्रासको संभावना देख्दैछु र त्यसलाई आउन नदिन यसका सम्पूर्ण अभियंता अग्रजहरुलाई आह्वान गर्न चाहान्छु ! किनकी गैर आवासीय नेपालीहरुको बिरोधमा खुलेर बोल्ने तर छिमेकबाट लाखौको संख्यामा नेपाली नागरिक आयात भएको बारे आँखा चिम्लिने राष्ट्रीय नेताहरु पनि बिद्यमान छन।
अब, गैर आवासीय नेपाली संघमा राजनीति नघुसाउ भन्ने सबैको चाहना हुँदाहुँदै पनि कताकता आई हल्दोरैछ । बास्तबमा हामीलाई नेताको संरक्षण चाहिनु भन्दा पनि गैर आवासीय नेपाली संघ आफैमा एउटा शक्ति केंद्र भइसकेको छ। नेता, अझ तिनका कार्यकर्तालाई गैर आवासीय नेपाली संघको सहयोग र साथ चाहिएको छ। नेपालमा जस्तो राजनैतिक आस्थाको आधारमा 'पानी बाराबार' गर्ने अवस्था बाहिर छैन र त्यसको कुनै औचित्य पनि छैन। बाहिर हरेक गैर आवासीय नेपालीले आफुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा मात्रै टिकाउन पनि निरंतर धेरै मेहनत गरी रहनु पर्छ। फेरी आ-आफ्नो मुलुकको स्थानीय राजनीतिले रोजीरोटी मै असर गर्छ । त्यसैले पनि यदि नेपाली राजनैतिक आस्थाको आधारमा मात्र संघको चुनाब लड़ियो भने हार निश्चित छ। म कसरी यों भन्ने सामर्थ्य राखे भन्ने प्रश्न स्वभाबिक हो । हामी सबै किन बिदेशमा भासियौ भन्ने कुरोको चुरो खोज्ने हो भने जिम्मेवार तत्व राजनीतिज्ञ शक्ति रहेका नै ठहरछन।
देशमा राम्रो शिक्षा, रोजगारको अवसर र शांति सुरक्षा सुशाशन भएको भए अहिलेको आधा पनि 'गैर' हुनु पर्ने थिएन। अझै पनि सरकारमा रहेका राजनीतिज्ञहरुको भ्रस्टाचार, कमीशन र घुसखोरी मात्र नभई सम्पूर्ण आचार नै समाचारमा नसुनेको नपढ़ेको दिन हुदैन। यस तर्कमा पनि बिश्वस्त नभए नेपालको लोकतांत्रिक संबिधान हेरौ, त्यहाँ स्पस्ट उल्लेख छ, गैर आवासीय नेपालीलाई राजनीती बाहेकको अधिकार मात्र दिइने छ। यस तर्कका साथ मेरो निष्कर्ष के हो भने राजनैतिलाई आधार मानेर चुनाव लड़दा, नराम्रो संग लडिन्छ, जीतिदैन।
यस परिस्थितिमा मैले भोगेको आधार मेरो सानो बुद्धिले देखेको समन्वय यहाँ उल्लेख गरी मेरो तर्फ़बाट योगदान दिए। भवनजी र कुमारजीले संघमा एउटा रिवाज बसालिसक्नु भएको छ, आफ्नो उपाध्यक्षको कार्यकाल दोहोर्याएर । यसको अर्थ मैले बुझे सम्म के हो भने संघको अभियानमा जुटी रहूं, सेवा गर्नु नै छ, माथिल्लो पद नै किन चाहियो र? यस्तो समर्पणलाई स्वीकार नगर्ने को होला? त्यसैले पनि बिगतमा दुबै उपाध्यक्षहरुले आफ्नो नेतृत्वलाई न्यायसंगत काम गर्नुभयो।
यी दुबै प्रतिस्पर्धी यस चुनाबमा हारेमा कसरी र कुन हैसियतमा सक्रिय भएर कसरी लाग्लान त? तर यो असहज परिस्थितिलाई किनारा लगाउनको लागि मात्रै भए पनि कुलजीले यथा स्थानबाट नै आउने कार्यकालमा सम्झौता गर्दा अतिसयोक्ति नहोला। यति भन्दै अर्को पटक कुलजीलाई जिताउँन म आफुले पनि शक्ति र स्रोत परिचालन गर्ने बाचा सहित हाललाई कलम बंद !
राधे राधे !